ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာတော့မယ့် နောက်ထပ် အန်တိုနီ ၊ ကွင်းလယ်အတွက် လီဗာပူး ရဲ့ အစီအစဉ် ၊ စပါး-အဲဗာတန် အလဲအထပ်တို့နဲ့ . . . နေ့လည်ခင်း တဖြတ် အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းများ - xyznews.co
ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာတော့မယ့် နောက်ထပ် အန်တိုနီ ၊ ကွင်းလယ်အတွက် လီဗာပူး ရဲ့ အစီအစဉ် ၊ စပါး-အဲဗာတန် အလဲအထပ်တို့နဲ့ . . . နေ့လည်ခင်း တဖြတ် အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းများ
ဒီနှစ် နွေရာသီမှာ ကစားသမား တယောက်မှ မခေါ်ယူ နိုင်သေးတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ အဲရစ် တန်ဟတ် လက်ထက် ပထမဆုံး ခေါ်ယူမှု အဖြစ် အိုင်ယက်စ် တောင်ပံ ကစားသမား အန်တိုနီ ကို ပေါင် သန်း ၄၀ ခန့် နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အိုင်ယက်စ် အသင်း တည်ရှိရာ နယ်သာလန် နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ် မြို့ကို ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကာ အပြောင်းအရွှေ့ ကို အဆုံးသတ် ညှိနှိုင်းကြမယ် လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီ ဒီယွန် ရဲ့ အခြေအနေ ကတော့ ထူးခြားမှု မရှိသေးပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဘက်က နောက်ထပ် ကမ်းလှမ်းမှုသစ် ကို ပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင် နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
Guardian သတင်းစာကတော့ အဲရစ်ဆင် ဟာ ယူနိုက်တက် ကို ငြင်းလိုက်တယ်လို့ ဖော်ပြသွားပါတယ် ။
ရီးရဲ တောင်ပံ ကစားသမားလေး ဗီနီဆီယပ် ဂျူနီယာ က သူဟာ ဥရောပ ချန်ပီယံ နဲ့ သက်တမ်းတိုးမယ် ဆိုတာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး လူငယ် ကစားသမားလေး ကေစီ ပယ်လ်မာ ကတော့ ကိုဗစ်ထရီ စီးတီး အသင်းဆီ ၃ နှစ် စာချုပ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ သွားတော့မယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် မာဆေး အသင်းဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဘရိုင်ယန် ဂီလ် ကို အငှားခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဆီဘတ်စတီယန် ဟေလာ အတွက် ဒေါ့မွန် ရဲ့ ယူရို ၃၃ သန်းတန် ကမ်းလှမ်းမှု ကို အိုင်ယက်စ် က ပယ်ချ ထားခဲ့ပြီး ဂျာမန် ကလပ်က နောက်တကြိမ် ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင် နေသလို ဟေလာ ကို အရ ခေါ်ယူ နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည် ထားကြောင်းလည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကွင်းလယ်ကို အားဖြည့်ဖို့ လိုအပ် နေတဲ့ လီဗာပူး ဟာ အင်တာမီလန် ကွင်းလယ်လူ နီကိုလို ဘာရယ်လာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ အခြေစိုက် CMW သတင်းရဲ့ ဖော်ပြချက် အရ လီဗာပူး ဟာ ၂၅ နှစ် အရွယ် အီတလီ လက်ရွေးစင် အတွက် နာဘီကီတာ နဲ့ ငွေသား အသုံးပြုကာ ကမ်းလှမ်းဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် ကတော့ ဘာရယ်လာ အတွက် ပေါင် သန်း ၇၀ ကျော် ဈေးသတ်မှတ် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လီဗာပူး နည်းပြကြီး ကလော့ ဟာ အသင်းမှာ ကစားခွင့် နည်းပါး နေတဲ့ အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်လူ အောက်စလိတ် ချန်ဘာလိန် ကိုလည်း ဆက်ထိန်းထားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး တိုက်စစ်သမားလေး မီနာမီနို ကတော့ မျှော်လင့် ထားသလောက် ကစားခွင့် မရရှိမှု အပေါ် စိတ်ပျက် နေပြီး နွေရာသီမှာ အသင်းပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးထားကာ အတ္တလန်တာ ၊ လိဒ် ၊ ဝုဗ် တို့လို သတင်းထွက် နေတဲ့ ကလပ်တွေဆီက ကမ်းလှမ်းမှုကို စောင့်ဆိုင်း နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSG ကတော့ နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ်တော့မယ့် ခရစ္စတိုဖီ ဂယ်လ်တီယာ အတွက် နိုက်စ် အသင်းကို ယူရို ၁၀ သန်း ပေးချေ ရဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းဟာ ဖူလ်ဟမ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ တိုဆင် အဒါရာဘိုင်အိုယို ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် ဟာ နည်းပြ ဆီးမြွန်းနီ အင်ဇာဂီ ကို စာချုပ် သက်တမ်းတိုးပြီး ၂၀၂၄ အထိ ချုပ်ဆိုဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ရရှိပါတယ် ။
PSG ကနေ မကြာခင် ထွက်ခွာ တော့မယ့် နည်းပြ ပိုချက်တီနို ကို ယူရို သန်း ၂၀ ပေးလျော်ဖို့ ညှိနှိုင်း ထားခဲ့ကြပြီး ပိုချက်တီနို ဘက်က အဆိုပါ ပမာဏထက် လျော့ချ ပေးဖို့ စိတ်ကူး မရှိတော့ဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကတ်တလန် အခြေစိုက် မွန်ဒို ဒီပို့တီပို သတင်းစာ ရဲ့ အဆို အရ ဘာစီလိုနာ နောက်ခံလူ ကလီးမန့် လန်းလတ် ဟာ နူးကမ့် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
နယ်သာလန် ကလပ် PSV နည်းပြသစ် ရုဒ် ဗန် နစ္စတယ်ရွိုင်း ကလည်း ဘာစီလိုနာမှာ ကစားနေတဲ့ နယ်သာလန် တိုက်စစ်မှူး လုခ် ဒီယွန် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လိဒ်ယူနိုက်တက် နည်းပြဟောင်း မာဆယ်လို ဘီယေဆာ က အရီချာဘလတ်တာ သာ ဘီဘာအို ဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးကောက် ခံရပါက သူဟာ ဘီဘာအို အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ အတည်ပြု ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တောင်ပံ ကစားသမား လူးကပ် မော်ရာ ကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေပြီး ရစ်ချလီဆင် ကို ခေါ်ယူလိုတဲ့ စပါး နဲ့ အပေးအယူမျှသွားဖို့ အလားအလာ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်မှု အတွက် ရုရှ ကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆန့်ကျင် နေချိန်မှာ ယူကရိန်း ကလပ် စပါးတပ် မော်စကို အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ Maciej Rybus ကို ပိုလန် အသင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် စာရင်းမှာ ထည့်သွင်း သွားတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ချန်လှပ် တော့မယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article ဂန်းနားတို့ တိုင်လီမန်းစ် အပေါ် သွေးအေးနေတဲ့ သတင်းအပါအဝင် အခြားအာဆင်နယ် သတင်းတိုများ
Next Article မာနေးရဲ့ အပြောင်းအရွေ့နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒင်းဆောင်းဒါးရဲ့ မှတ်ချက်ကို သဘောမတူခဲ့တဲ့ ဒယ်ပီယာရို